Fampiharana marobe misimisy fanampiana manangona efijery tsy misy faka ao amin'ny Android 5.0 | Androidsis
Fampiharana marobe misimisy kokoa manampy ny firaketana ny rakipeo tsy misy faka amin'ny Android 5.0
Cristina Torres sary placeholder | | android-root, Fampiharana Android
Avy amin'ny Androidsis dia efa nilaza taminay tamin'ny fotoana izay dingana tokony harahinao ianao mba hahafahanao mirakitra ny efijery amin'ny Android-nao, ary raha ny tokony ho izy dia ilaina ny fahazoan-dàlana hikirakira ny fizotrany. Saingy, vao haingana, ny mpiara-miasa amiko Alfonso, Nolazainy taminay fa io fanaovan-javatra io dia efa ho avy tsy misy ilana fidirana manokana amin'ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa, amin'ny Android 5.0. Ary toa teo alohan'ny noeritreretinay dia efa nanomboka nandefa ny azy ireo ny fisoratana anarana fanavaozana miaraka amin'ny fanohanan'ity safidy vaovao ity mazava ho azy fa manokatra tontolon'ny fahafaha-manao ho an'izay rehetra te hilalao amin'ny findainy.
Amin'ity tranga ity dia holazainay aminao hoe iza amin'ireo rindranasa efa manao dokambarotra ny fanohanan'izy ireo amin'ny pejiny Google tsirairay avy, na dia mazava ho azy aza, tsy maintsy manana ny kinova Android farany ianao hahafahana mametraka azy io ary mampandeha azy miasa. Ka amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ho tonga ny fotoana hiandrasana ilay irina sy izao Ny Android 5.0 Lollipop mitaredretra dia mahatratra ny fitaovantsika. Raha ny ahy, na dia efa nahatanteraka ny fizotrany ho an'ny Nexus 5 aza aho, ary satria satria mbola tsy nohavaozina tamin'ilay kinova vaovao io dia tsy afaka mitsapa ny iray amin'ireo rindranasa voalaza etsy ambany aho. Mazava ho azy, amin'ny tambajotra dia toa manome valiny ho an'ireo izay tamin'ny lafiny sasany na nahavita nanakodia tamin'ny Android farany izy ireo.
1 SCR Screen Recorder 5+ maimaim-poana
2 Mpanoratra efijery ilos - Tsy misy faka
3 Beta fitaratra
4 Lollipop Screen Recorder
SCR Screen Recorder 5+ maimaim-poana
Ho an'ny tsiriko, izy io dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra raha ny firaketana ny efijery ny terminal findainao, ary ankehitriny fa tsy ilaina ny mamaka intsony, dia ho mora kokoa ho an'ireo mpampiasa vao. Ny kinova maimaim-poana dia voafetra amin'ny horonantsary 3 minitra fotsiny, saingy heveriko fa ampy izany mba hizaha toetra ny asany rehetra ary hanapahana hevitra raha mendrika ny handoavana azy io ihany ny 0,89 euro izay vidin'ny iray manontolo ankehitriny. Rehefa dinihina fa amin'ny fitaovana tsy misy Android 5.0 ary mila root, ny vidiny dia 4,99 euro, heveriko fa mendrika izany.
Mpanoratra efijery ilos - Tsy misy faka
Iray amin'ireo vaovao manararaotra an'ity endri-javatra vaovao ity izay manomboka amin'ny Android 5.0 Lollipop. Afaka alaina maimaim-poana izy io ary avy amin'ny pikantsary dia toa manana interface tsara tena mahaliana izy io. Maimaimpoana ary toa manolotra fanohanana am-peo tsara. Raha vantany vao afaka aho dia andramako izany ary holazaiko anao amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Amin'izao fotoana izao, raha manana Android 5.0 ianao dia lazao anay ny fomba fiasan'izy io ho anao ao amin'ny terminal-nao.
Fandraisana an-tsary sy fitaratra
Ny iray amin'ireo rindranasa mahazatra mba handraketana ny efijery amin'ny Android dia nanavao ny fampiharana azy ary manondro fa raha manana Android 5.0 ianao dia tsy mila manaraka ireo dingana teo aloha ho an'ny root hiaraka aminy. Na izany na tsy izany dia mbola ilay fampiharana taloha ihany io, ka raha tsy manana ny kinova vaovao ianao dia te-hametraka azy ihany, manaraka ny rehetra dingana izay antsipirihantsika amin'ny fotoana, azonao atao izany amin'ny rohy iray ihany. Amin'ity tranga ity dia maimaim-poana izy io, na dia beta aza, noho izany dia mety hanome lesoka sasany.
Miaraka amin'ny fahafaha-manafoana ny fidirana amin'ny faka amin'ny Android 5.0, nisy fampiharana vaovao hafa koa niseho izay mamela antsika hanoratra ny efijery amin'ny Android. Iray amin'izany. Afaka alaina maimaim-poana izy io ary na dia tsy manana sary marobe aza izy io, raha vantany vao tonga ilay kinova vaovao an'ny OS dia mampanantena fitsapana an'io aho ary misy vitsivitsy hafa ho an'ireo izay maniry ny fanadihadiana alohan'ny hanapahana hevitra hametraka fitaovana vaovao. Toy ny teo aloha dia maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » android-root » Fampiharana marobe misimisy kokoa manampy ny firaketana ny rakipeo tsy misy faka amin'ny Android 5.0
Azonao atao izao ny manitsy ireo hafatra teo aloha tao amin'ny Instagram ary hahita fifandraisana
Fampitahana ny Android 5 Lollipop sy KitKat amin'ny Galaxy S4